कमल थापाले भारतलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘तिम्रो आदेश हामी अस्विकार गर्छौ’ – Dainik Sangalo
कमल थापाले भारतलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘तिम्रो आदेश हामी अस्विकार गर्छौ’
July 28, 2020 194
काठमाडौं । नेपालले भारतद्धारा अतिक्रमित भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियामा नेपाल विरुद्ध आपत्तीजनक सामग्ी प्रसारण भएका छन् । भारतले नेपाली भूमी मिचेर सडक समेत निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि चासो देखाएको छ । भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै नेपालले अतिक्रमति भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । वारम्बार विवादित सिमानका विषयमा वार्ता गर्न प्रस्ताव राख्दा भारतले नकार्दै आएको छ ।
त्यसैले नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । अहिले नेपाल भारत सिमा विवाद चुलिएको छ । नेपालले पनि आफ्नो भूमी रक्षा गर्न सुरक्षाकर्मीको उपस्थिती सिमानामा बढाएको छ । सिमानामा संधै नेपालीलाई दुख दिँदै आएका भारतीयहरु अहिले नेपाली सुरक्षाकर्मीको सकृयतासंगै अत्तालिएका छन् । त्यसैले नेपाली भूभागलाई आफ्नो दावी गर्दै कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालीलाई नै प्रवेश गर्न नदिनु भन्दै दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन् ।
ढिलो गरी सार्वजनिक भएको भारतीय पत्रका विषयमा अहिले चर्चा चलेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । यसैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त्यसवारे कडा टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रियताको सवालमा खरो उत्रने कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बारेमा भारतीय मिडियाले आपत्तीजनक सामग्री प्रशारण गर्दा पनि कडा रुपमा उत्रिएका थिए । उनले ओलीसंग राजनीतिक विपती भएपनि आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आपत्तीजनक टिप्पणी सहन नसक्ने भन्दै भारतलाई चेतावनी दिएका थिए ।
नेता थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत भारतले नेपाललाई हालै पठाएको पत्रका बारेमा पनि कडा प्रतिकृया जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, नेपालको अविभाज्य भूमीमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।यस्ता आदेश हामी अस्विकार गर्छौ। सरकारले तत्काल कुटनीतिक माध्यमबाट प्रतिवाद गरोस्
भारतको धार्चुलास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले नेपालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै त्यस भूभागमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिन पत्र पठाएको थियो।त्यस भूभागमा नेपालीहरु लूकिछिपि गएको र त्यस्ता गतिबिधिबारे सूचना दिन भन्दै पत्राचार गरेको खुलेपछि त्यसवारे अहिले चर्चा भएको छ ।
Prevप्रहरीले समाएको १५ किलो सुनमध्ये आधा किलोमात्रै सक्कली कसरी भयो ?
Nextआयुर्वेदका डाक्टर भन्छन्, ‘डब्लुएचओको पछाडी लागेर मात्र नेपालमा कोरोना रोकिन्न, त्यसको जिम्मा हामिलाई दिनुस्’
बास्कोटालाई सपनामा पनि नसोचेको झड्का: ६ अर्ब घोटाला गरेको भिडियो नै सार्वजनिक हुदैँ ! (हेर्नुस् भिडियो)